Fanampiana ara-bola avy amin'ny Oniversiten'i Hodges, kendrena hahatonga ny oniversite ho mora
Fanampiana ara-bola ao amin'ny Oniversite Hodges, vatsim-pianarana, Alliance ary programa fihenam-bidy
Ao amin'ny Oniversiten'i Hodges dia fantatsika fa indraindray ny fandehan'ny mpianatra tsy maintsy hahomby dia tsy mifanaraka amin'ny fomba tokony hanohizany ny fianarany. Izany no antony nanoloranay tena hanampy ny mpianatra hahita fanampiana ara-bola sy ny vatsim-pianarana hanampiana azy ireo amin'ny lalan'izy ireo mankany amin'ny fahombiazana. Ho fanampin'ny 11 tapitrisa dolara amin'ny mari-pankasitrahana EASE nozarainay, manana vatsim-pianarana maromaro izahay, programa amin'ny fihenam-bidy ary drafitra fandoavambola ihany koa.
Karazana fanampiana azo:
Fanampiana amin'ny fanjakana
Manambola amin'ny tenanao. Io no fampiasam-bola tsara indrindra azonao!
Topimaso amin'ny FAFSA
Ny fahazoana diplaoma amin'ny oniversite dia iray amin'ireo fampiasam-bola tokana manan-danja indrindra hataonao, ary mino tanteraka izahay fa hahafaly anao ny fampiasam-bolanao any amin'ny Hodges University.
Hodges University's Office of Student Financial Services dia nanokana manam-pahaizana manokana hanampy anao amin'ny safidy fandaniana amin'ny fanabeazana toy ny fanampiana ara-bola, kaontin'ny mpianatra ary fanampiana vahaolana amin'ny boky. Ny manam-pahaizana manokana momba ny fanampiana ara-bola dia afaka manome fanampiana amin'ny famatsiam-bola ny fianaranao raha tsy ampy ny enti-manana manokana sy ny fianakaviana.
Manambola amin'ny ho avinao amin'ny fanabeazana ary fenoy anio ny application FAFSA. Hodges University FAFSA kaody dia 030375.
Hodges University FAFSA kaody dia 030375.
Hodges Toro lalana FAFSA
Dingana hampiharana fanampiana ara-bola
1. Fenoy ny FAFSA
Mamita ny Fampiharana maimaim-poana ho an'ny fanampiana federaly (FAFSA) no dingana voalohany mankany amin'ny fahazoana fanampiana federaly ho an'ny oniversite. Maimaimpoana ary haingana ny famitana sy fandefasana ny FAFSA, ary manome anao fidirana amin'ny loharanom-bola fanampiana lehibe indrindra handoavana oniversite. Izy io koa dia afaka mamaritra ny fahafahanao mahazo fanampiana ara-panjakana sy an-tsekoly. Hodges 'FAFSA kaody dia 030375.
2. Miaraha miasa amin'ny mpanolotsaina
Ao amin'ny Oniversiten'i Hodges, ny mpanolotsaina fanampiana ara-bola dia afaka manampy anao hahatakatra ny safidinao amin'ny fandoavana ny oniversite ary hitarika anao amin'ny fizotran'ny fangatahana karazana fanampiana ara-bola isan-karazany.
3. Mikaroha fanomezana, vatsim-pianarana, indram-bola ary safidy amin'ny fianarana-asa
Ny vatsim-pianarana sy ny vatsim-pianarana dia omena miankina amin'ny filàna sy ny fahamendrehana ary vola maimaimpoana ho an'ireo mpianatra mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fahazoana mandray andraikitra. Tsy toy ny vola fanampiana, ny fampindramam-bola dia vola nindramin'ny mpianatra sy / na ny ray aman-drenin'izy ireo ary tsy maintsy averina miaraka amin'ny zana-bola. Ny programa fandalinana asa dia ahafahan'ny mpianatra mandray asa tapa-potoana raha miditra amin'ny Hodges University izy ireo.
4. Midira amin'ny taratasy fanamarinana anao
Ny Letter Award anao dia milaza aminao ny programa fanampiana ara-bola azonao raisina amin'ny fanabeazana anao ao amin'ny Oniversiten'i Hodges. Ahitana ireo karazana sy vola fanampiana azonao raisina avy amin'ny federaly, fanjakana ary loharanom-pianarana ity taratasy ity.
Karazana fanampiana isan-karazany
Ny vatsim-pianarana sy ny vatsim-pianarana dia omena miankina amin'ny filàna sy ny fahamendrehana.
Ny vatsim-pianarana dia vola maimaimpoana ho an'ireo mpianatra mahafeno ny fepetra takiana amin'ny maha-mendrika azy.
Ny fampindramam-bolan'ny mpianatra dia vola nindramin'ny mpianatra sy / na ny ray aman-dreniny izay voaloa amin'ny zana-bola.
Mpikaroka vatsim-pianarana Niche
Fikarohana momba ny mari-pahaizana manokana momba ny diplaoma
Fanampiana ny fianaram-pianakaviana manokana / miaramila
Hodges University dia mandray anjara amin'ny programa EASE (fantatra amin'ny anarana hoe FRAG) ankehitriny. Nandritra izay 5 taona lasa izay, ny Oniversite Hodges dia afaka nanolotra EASE ho an'ny mpianatra 7,500 11 mahery miaraka amin'ny famatsiam-bola XNUMX tapitrisa $.
Mazava ny hoavy
Hodges University dia mandray anjara amin'ny Program Bright Futures ankehitriny.
Florida mialoha karama
Ny University Hodges dia miara-miasa amin'ny Florida Pre-Paid ary mamela ny mpianatra hampiasa ny famatsiam-bolan'ny FPP araka ny safidiny.
Florida feno dia noforonina hanampiana ny olon-dehibe maherin'ny 2.8 tapitrisa nahazo diplaoma tamin'ny oniversite, saingy tsy nahazo mari-pahaizana. Ny ampahany tsara indrindra, satria ny Florida manontolo dia mamatsy vola ny fanjakana Florida, maimaim-poana ny tolotra omen'izy ireo.
Programme miaramila adidy mavitrika - fihenam-bidy $ 250 isan'ora
Ny fihenan'ny miaramila adidy mavitrika dia azo alaina ho an'ny mpikamban'ny serivisy ho an'ny adidy 10 ary ny mpiambina sy ny Reserve (AGR) voafaritra etsy ambany. Ity fihenam-bidy ity dia azo zahana ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma na mpianatra nahazo diplaoma.
Fandaharana veteranina - fihenam-bidy $ 100 isaky ny ora indram-bola / $ 2 (fihenam-bidy $ 10) isan'ora
Ny fihenan'ny vétéran dia azo alaina ho an'ireo veteranina navotsotra tamim-panajana izay tsy mendrika handray tombo-tsoa avy amin'ny Departemantan'ny raharaha Veterans na ny departemantan'ny fiarovana. Ity fihenam-bidy ity dia misy ho an'ireo mpianatra nahazo diplaoma na mpianatra nahazo diplaoma.
Programme CareerSource - fihenam-bidy $ 100 isan'ora
Ny fihenam-bidy CareerSource dia misy ho an'ireo mpianatra izay misoratra anarana amin'ny fotoana iray ankehitriny ary mahazo fanampiana ara-bola avy amin'ny CareerSource ho an'ny fandaniana amin'ny fanabeazana.
Programme momba ny mpampiasa / ny fiaraha-miasa - fihenam-bidy $ 100 isan'ora
Ny fihenam-bidy ho an'ny mpampiasa / ny fiaraha-miasa dia azon'ny mpianatra misoratra anarana mandritra ny fotoana fohy ary ampiasain'ny iray amin'ireo fiaraha-miasa amin'ny orinasa / orinasa Hodges University. Ny lisitr'ireo fiaraha-miasa ankehitriny dia hita eto ambany.
Hodges University Grgraduate (HUGS) Program - fihenam-bidy $ 100 isaky ny ora credit
Ny fihenan'ny diplaoma HU dia azon'ny mpianatra misoratra anarana mandritra ny fotoana iray ary nahavita ny mari-pahaizana bakalorea tao amin'ny Oniversiten'i Hodges ary ankehitriny dia mamita ny mari-pahaizana Master voalohany amin'ny Hodges University.
Mba jereo ny Handinika ny mpianatra hijerena ny antsipiriany momba ny programa fihenam-bidy amin'ny saram-pianarana tsirairay sy ny fepetra takiana amin'ny fahazoana alalana.
Fihenam-bidy Alliance Alliance
Fiantohana Brown sy Brown
Biraon'ny Sheriff County Charlotte
Tanànan'i Ft. Departemantan'ny polisy any Myers
Tanànan'ny Nosy Marco
Governemanta County Collier
Sekolim-panjakana Collier County
Biraon'ny Sheriff County
Glenview ao amin'ny Pelican Bay
Fanavotana ny vavahady volamena
Distrikan'ny Sekolin'i Hendry County
Manantena Serivisy fitsaboana
Kaomisionan'ny Kaomisionan'ny Kaontin'i Lee County
Sekolim-panjakana Lee County
Biraon'ny Sheriff Lee County
Rafitra fahatsiarovana an'i Lee
Vondrona mpitsabo an'arivony taona
Vondrona fitsaboana Naples
Rafitra fitsaboana NCH
Fikarakarana voalohan'ny mpitsabo ny SWFL
Rafi-pitsaboana isam-paritra mpitsabo
Liana amin'ny Alliance Alliance? Mifandraisa amin'ny Liaison Community Outreach & Recruitment, Angie Manley, CFRE amin'ny 239-938-7728 na mailaka amanley2@hodges.edu.
Fandaharam-pahaizana momba ny vatsim-pianarana
Mianara bebe kokoa momba ny programa momba ny vatsim-pianarana
Topimaso momba ny fampahalalana momba ny vatsim-pianarana ho an'ny oniversite Hodges
Ny vatsim-pianarana dia homena mifototra amin'ny fepetra napetraka isaky ny loka loka vatsim-pianarana ambanin'ny oniversite sy / na ny mpamatsy vola.
Taorian'ny nahazoan'ny Komity ny vatsim-pianarana, nifidy ary nanaiky ny vatsim-pianarana rehetra isaky ny fotoam-pivoriana, ny lisitr'ireo mpandray dia hatolotra ny Biraon'ny Serivisy ara-bola ho an'ny mpianatra ho an'ny famoahana.
Ny fanomezana vatsim-pianarana dia mitovy lanja amin'ny fahombiazan'ny akademika / salan'isan'ny isa (GPA), ny fisoratana anarana (ora fampindramam-bola isaky ny fotoam-pianarana), filàna ara-bola / tombana ho an'ny fandraisana anjaran'ny fianakaviana (EFC), ary ny fanadihadiana / fanadihadiana (raha ilaina izany).
Fepetra takiana ho an'ny vatsim-pianarana rehetra
Mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany na mpianatra nahazo diplaoma amin'ny toerana tsara amin'ny fotoam-pivoriany amin'izao fotoana izao miaraka amn'ny farafahakeliny farafahakeliny GPA an'ny 2.0 ho an'ny mpianatra bakalorea ary 3.0 GPA ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma dia mampihena ny vola fanampiana sy ny sarany rehetra.
Ny vatsim-pianarana rehetra etsy ambany dia mety mitaky fepetra fanampiny mba hahafahan'ny mpianatra iray mahazo izany vatsim-pianarana izany.
Ireo mpianatra mahazo fihenam-bidy amin'ny saram-pianarana sy / na fanafoanana ny saram-pianarana ho anisan'ny fifanarahana na politika hafa any amin'ny oniversite dia tsy ho afaka handray vatsim-pianarana andrim-panjakana satria ity karazana famatsiam-bola ity dia voasokajy ihany koa ho toy ny fanampiana eo amin'ny andrim-panjakana.
Ny fangatahana rehetra sy ny taratasy fanovozan-kevitra dia lasa fananan'ny Hodges University ary tsy haverina.
Izay fangatahana vatsim-pianarana hita fa misy fampahalalana diso na diso dia hofoanana amin'ny fandinihana bebe kokoa ny Komitin'ny vatsim-pianarana.
Ny sanganasa, raha ilaina, dia tsaraina amin'ny ambaratonga rubric izay hahitana ny fomba / atiny ary koa ny fahaizana manoratra izay mazava, mahay mandaha-teny, voalamina lojika, ary maneho fahitana manokana momba ny olana filozofika sy ara-psikolojika tafiditra amin'ilay lohahevitra voatondro. ).
Tahirim-bolan'ny oniversite tsy miankina Florida
Amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Colleges Independent sy oniversite any Florida (ICUF), ny Hodges University dia manana fotoana ahafahana mangataka vatsim-pianarana omen'ny Florida Independent College Fund (FICF). Ny FICF dia fototra tsy mitady tombom-barotra ho an'ny fampandrosoana programa sy loharanon-karena ho an'ny Colleges tsy miankina sy oniversite any Florida (ICUF). Izy io dia miantoka vola amin'ny mpamatsy vola, indostria ary orinasa tsy miankina, ary koa avy amin'ny fanjakana Florida. Ny vatsim-pianarana FICF dia manana endrika sy fepetra manokana hodinihina. Ny Komitin'ny vatsim-pianarana Hodges University dia manadihady ny fangatahana ataon'ny mpianatra ho fanampiana ara-bola tsy miankina an'ny HU ary koa ny sekolin'ny mpianatra amin'ny ankapobeny mba hahitana fanendrena mifanaraka amin'ny mari-pahaizana FICF.
Raha nomena vatsim-pianarana FICF ny mpianatra ary mihoatra ny vola mitentina dolara tsy miankina natambatra tamin'ny torolàlana faharoa, ny mpianatra dia azo heverina ho tsy mendrika hahazo fanampiana fanampiny avy amin'ny Komitin'ny vatsim-pianarana Hodges University.
Ny fisehoana, ny fanolorana ary ny fahafenoan'ny taratasy fangatahana dia horaisina amin'ny fanomezana loka vatsim-pianarana. Ny fangatahana feno dia tsy hojerena. Ny fangatahana rehetra sy ny taratasy fanovozan-kevitra dia lasa fananan'ny Hodges University ary tsy haverina.
Ny sanganasa, raha ilaina, dia tsaraina amin'ny fomba sy ny atiny ary koa ny fanoratana izay mazava, mahay mandaha-teny, voalamina tsara ary maneho ny fahafantarana miavaka ireo olana filozofia sy ara-psikolojika tafiditra amin'ireo lohahevitra voatendry.
Ny Komitin'ny vatsim-pianarana Hodges University dia afaka manadihady ireo mpangataka ho anisan'ny fizotrany raha sanatria misy fampahalalana fanampiny takiana amin'ny fizotry ny fanapaha-kevitra.
Amin'ny fanomezana ny vatsim-pianarana, ny komity momba ny vatsim-pianarana Hodges dia mitsara ireo mpangataka miorina amin'ny (1) fahombiazan'ny akademika, (2) ny antontan-taratasin'ny fangatahana kandidà, raha ilaina izany, (3) dinidinika manokana, raha ilaina, (4) filàna ara-bola ary (5 ) fahafenoan'ny fampiharana.
Ny vatsim-pianarana natolotry ny FLORIDA INDEPENDENT COLLEGE FUND (FICF) dia heverina ho mitovy amin'ny vatsim-pianarana tsy miankina amin'ny Anjerimanontolon'i Hodges. Ny mpianatra dia notendrena handray ny mari-pahaizana FICF avy amin'ny Komitin'ny vatsim-pianarana Hodges University. Ny sandan'ny loka napetraky ny FICF dia mety miovaova.
Vatsim-pianarana Hawks Fund
Ny vatsim-pianarana Hawks Fund (fantatra ihany koa amin'ny hoe dana ho an'ny vatsim-pianarana ankapobeny) dia misy fanomezana ankapobeny avy amin'ireo mpanome malala-tanana izay manome matetika ho an'ny oniversite. Ity famatsiam-bola ity dia misy ireto vatsim-pianarana manaraka ireto:
Vatsim-pianarana Gaynor Hawks Fund
Thelma Hodges Hawks Fund vatsim-pianarana
Vatsim-pianarana CenturyLink Hawks Fund
Vatsim-pianarana Pettit Hawks Fund
Miankina amin'ny fepetra rehetra, araka ny voalaza etsy ambony, momba ny “Fepetra takiana amin'ny vatsim-pianarana REHETRA. ”
Ireo mpianatra mitady mari-pahaizana bakalorea dia voafetra amin'ireto manaraka ireto isaky ny fotoam-pivoriana:
Niditra an-tsoratra tao amin'ny ora naharitra 1-8: hatramin'ny $ 500
Niditra an-tsoratra tao amin'ny ora naharitra 9-11: hatramin'ny $ 1000
Nisoratra anarana ao anatin'ny ora 12 na mihoatra: hatramin'ny $ 1500
Ireo mpianatra mitady mari-pahaizana diplaoma dia voafetra amin'ireto manaraka ireto isaky ny fotoam-pivoriana:
Niditra an-tsoratra tao amin'ny ora naharitra 1-5: hatramin'ny $ 500
Niditra an-tsoratra tao amin'ny ora naharitra 6-8: hatramin'ny $ 1000
Nisoratra anarana ao anatin'ny ora 9 na mihoatra: hatramin'ny $ 1500
Manana mpianatra marobe izahay izay mangataka amin'ny vatsim-pianarana Hawks Fund isam-bolana, noho ny fanombohana isam-bolana; na izany aza, ny komity vatsim-pianarana dia mahatsapa ny fandanjalanjan'ny vola ankehitriny ary mety mametra ny famatsiam-bola azo aloa isam-bolana.
Fanampiana vatsim-pianarana ho an'ny vatsim-pianarana fanabeazana veterans (SAVE)
Miankina amin'ny fepetra rehetra voalaza etsy ambony momba ny “Fepetra takiana amin'ny vatsim-pianarana REHETRA”; SY
Tokony ho veterana na vady / miankina amin'ny veterana kilemaina na maty mikatsaka bakalorea na bakalorea.
Tao anatin'izay taona lasa izay, ity famatsiam-bola ity dia notazonina mandra-pahatongan'ny fahavaratra mba hanondroana ny famatsiam-bola ho an'ny lalao noteren'ny federaly hahazoana tombony VA Yellow Ribbon; na izany aza, ny veterana mila vola amin'ny Yellow Yellow Ribbon tamin'ny taona lasa dia nihena midika fa afaka manomboka manangona vola SAVE bebe kokoa mandroso isika.
Fianarana momba ny kaonty Jerry F. Nichols
Miankina amin'ny fepetra rehetra voalaza etsy ambony momba ny “Fepetra takiana amin'ny vatsim-pianarana REHETRA";
Ny programa diplaoma akademika dia tsy maintsy ao amin'ny kaonty;
Sata fisoratana anarana mandritra ny fotoana feno (mari-pankasitrahana 12 na mihoatra an'ny UG; 9 na mari-pankasitrahana GR bebe kokoa); SY
Farafahakeliny 3.0 GPA ho an'ny mpianatra ambaratonga faharoa na mpianatra ambaratonga ambony.
Mpianatra dia azo omena $ 1500 isaky ny fotoam-pivoriana.
Voafetra ihany ny fividianana famatsiam-bola raha misy ihany koa ny mason-tsivana manokana izay tsy marihin'ny mpianatra marobe amin'ny kaonty amin'izao fotoana izao.
Jerry F. Nichols vatsim-pianarana momba ny kaonty veterana
Aleo ny toetoetran'ny veterana / miaramila, saingy azo omena mpianatra tsy manana miaramila / veterana raha tsy misy mpianatra heverina ho mendrika;
Voafetra ihany ny fividianana famatsiam-bola raha misy ihany koa ny mason-tsivana manokana izay tsy marihin'ny mpianatra marobe amin'ny kaonty sy ny toetran'ny veterana amin'izao fotoana izao.
Vatsim-pianarana Rotary Avaratra Naples
Mpianatra nahazo diplaoma tamin'ny Sekolin'i Collier County na nipetraka tany Collier County;
Manatreha farafahakeliny amin'ny fivoriana iray (1) Naples North Rotary, izay mifandrindra amin'ny alàlan'ny University of Hodges (talen'ny fandrosoana amin'ny oniversite) sy ny mpikambana ao amin'ny klioba; SY
Mandraisa anjara amin'ny tetikasa serivisy iray (1) Naples North Rotary ao anatin'ny taona nahazoana famatsiam-bola.
Ny mari-pahaizana momba ny vatsim-pianarana natolotry ny mpamatsy vola dia mampihena ny habetsaky ny fangatahana vatsim-pianarana izay raisin'ny Komity vatsim-pianarana manokana momba io vatsim-pianarana io. Mampalahelo fa mahatsapa ny mpianatra fa mety tsy ho afaka hanatrika fivoriana voafaritra sy / na handray anjara amin'ny tetik'asa fanompoana noho ny fiainany manokana sy ny fandaharam-potoanany.
Vatsim-pianarana Meftah Foundation ho an'ny reny tokan-tena
Tokony ho reny tokan-tena manana zanaka tsy ampy taona mipetraka ao an-trano;
Nisoratra anarana tamina fandaharam-pianarana an-tsekoly na an-tserasera; SY
Mitady diplaoma amin'ny oniversite hampitomboana ny asan'izy ireo sy ny fidiram-bolan'ny fianakaviana.
Mpandray iray (1) dia azo omena $ 2500 isan-taona mandritra ny fotoan'ny Fahalavoana.
Betsaka ny vola azo ampiasaina; indrisy, noho ny lalàna mifehy ny mpamatsy vola, vola $ 2500 miaraka amin'ny mpandray iray (1) ihany no vola be indrindra azo aloa isan-taona.
Vatsim-pianarana Moorings Park Foundation amin'ny mpitsabo mpanampy
Mpianatra manovo mari-pahaizana bakalorea amin'ny mpitsabo mpanampy; SY
Homena laharam-pahamehana ireo mpandray monina ao amin'ny County Collier, fa tsy ilaina.
Ny mpianatra dia voafetra amin'ny ireto manaraka ireto isaky ny fotoam-pivoriana:
Ny vatsim-pianarana dia mifototra amin'ny famaritana ny programa izay manana mpianatra be dia be ao amin'ny programa raha toa kosa misy famatsiam-bola voafetra voaray isan-taona.
Vatsim-pianarana Moorings Park Foundation amin'ny fahasalamana ara-tsaina
Mpianatra manovo mari-pahaizana Master amin'ny toro-hevitra momba ny fahasalamana ara-tsaina; SY
Peter & Stella Thomas vatsim-pianarana veterans
Veteranina iray izay efa navotsotra tamim-panajana;
Fanadihadiana miresaka momba ny firaketana ny asa fanompoana ataon'ny miaramila manokana, ao anatin'izany ny tanjona sy drafitra momba ny asa aorian'ny fizarana diplaoma;
Sata fisoratana anarana mandritra ny fotoana feno (bola 12 na mihoatra an'ny UG; 9 na mari-pankasitrahana GR) bebe kokoa;
Mponina ao Collier, Lee na County Charlotte; SY
Farafahakeliny 2.5 GPA ho an'ny mpianatra ambaratonga faharoa na mpianatra ambaratonga ambony.
Ny sandan'ny vatsim-pianarana dia hitovy amin'ny saram-pianarana ihany (iray) taranja iray (1) isaky ny fotoam-pianarana.
Ny vatsim-pianarana dia voafetra ho roa ambin'ny folo (12), isan-taona.
Ny mari-pahaizana momba ny vatsim-pianarana dia mitondra fangatahana voafetra, indrindra momba ny ampahany amin'ny lahatsoratra. Raha mpianatra maro no tsy mankafy amin'ny fanoratana / famoronana sanganasa, ny ekipan'ny Office of Student Financial Services 'veterans Services dia nanomboka niresaka tamin'ny mpianatra taloha momba ny fanoratana lahatsoratra ary manampy azy ireo amin'ny fizotrany.
Ny vola farafahakeliny isan-taona amin'ny vatsim-pianarana atolotra dia manome ahiahy ihany koa; raha toa ka afaka manome mpianatra 12 ny Komitin'ny vatsim-pianarana dia 27,000 XNUMX $ isan-taona ny habetsany ampiasaina indrindra.
John & Joanne Fisher vatsim-pianarana veterans
Veteran na vadin'ny veterana iray izay navotsotra tamim-panajana;
Fanadihadiana miresaka momba ny firaketana ny asa fanompoana ataon'ny miaramila manokana na ny fomba fijerin'ny vady ny vokatr'izany ao anatin'izany ny tanjona sy drafitra momba ny asa aorian'ny fizarana diplaoma;
Ny vatsim-pianarana dia voafetra ho loka roa ambin'ny folo (12), isan-taona.
Raha tsy misy ny veterana mahay na vady efa ela, dia azo omena ny mpianatra Fisher School of Technology (FSOT) ny volan'ny vatsim-pianarana.
Earl & Thelma Hodges vatsim-pianarana
Ny famoahana lahatsoratra momba ny fanamby ataon'ny tena alohan'ny hidirany amin'ny Hodges University ary ao koa ny tanjona sy ny drafitra asa aorian'ny diplaoma;
Mponina ao Collier, Lee, Charlotte, Glade na Hendry County; SY
Ny vatsim-pianarana dia voafetra ho loka roa (2) isan-taona, manokana ho an'ny fararano sy ririnina ihany.
Ny mari-pahaizana momba ny vatsim-pianarana dia mitondra fangatahana voafetra, indrindra momba ny ampahany amin'ny lahatsoratra. Raha mpianatra maro no tsy mankafy amin'ny fanoratana / famoronana sanganasa, ny Office of Student Services Financial dia miara-miasa akaiky amin'ny Office of Student Experience mba hanazavana tsara ny fizotran'ny lahatsoratra sy ny fomba fanoratana lahatsoratra mahomby.
Ny vola farafahakeliny isan-taona amin'ny vatsim-pianarana atolotra dia manome ahiahy ihany koa; raha toa ka afaka manome mpianatra 2 ny Komitin'ny vatsim-pianarana dia 4,500 XNUMX $ isan-taona ny habetsany ampiasaina indrindra.
Earl & Thelma Hodges vatsim-pianarana veterans
Fanadihadiana miresaka momba ny firaketana ny asa fanompoana ataon'ny miaramila manokana, ao anatin'izany ny tanjona sy drafitra momba ny asa aorian'ny fizarana diplaoma; SY
Farafaharatsiny farafaharatsiny fisoratana anarana tapa-potoana (farafahakeliny 6 na mihoatra ny isa isaky ny session).
Vatsim-pianarana Jeanette Brock LPN
Ny programa diplaoma dia tsy maintsy ao amin'ny Licence Praktical Licence (LPN);
Farafaharatsiny farafahakeliny mari-pahaizana isa naoty (GPA) an'ny 2.0.
Ny komity vatsim-pianarana dia mahatsapa ny fandanjalanjan'ny vola ankehitriny ary voafetra amin'ny ohatrinona tokony hividianana vola isam-bolana.
Ahoana no fomba fangatahako ho an'ny vatsim-pianarana andrim-panjakana?
Award Spring no rafitra elektronika ahafahan'ny mpianatra miditra (sonia tokana) ary mameno ny fangatahana vatsim-pianarana rehetra. Alohan'ny hampiharana azy ireo, ny mpianatra dia afaka mahita fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny vatsim-pianarantsika tsirairay sy ny mason-tsivana ilaina mba hahazoana vola hangatahana. Fitaovana lehibe ahafahan'ny mpianatra mangataka vatsim-pianarana iray na maromaro amin'ny fotoana iray. Izahay izao dia miasa amin'ny fanavaozana ny rafitry ny Lohataona Award mba hahafahan'ny mpianatra mahita antsipiriany bebe kokoa momba ny vatsim-pianarana, ny mason-tsivana ilaina, ny fe-potoana isaky ny fangatahana vatsim-pianarana, ary rahoviana no hangataka isaky ny vatsim-pianarana - ho avy ireo fanavaozana ireo amin'ny fotoam-pivoriana janoary 2019 sy ny sisa.
Fialana andraikitra amin'ny famatsiam-bola vatsim-pianarana
Ny tanjon'ny fandaharam-pianarana vatsim-pianarana Hodges dia ny fanomezana ny loharanon-karena ho an'ny mpianatra araka izay tratra mba hahafahan'izy ireo manomboka na manohy ny fianarany amin'ny oniversite. Ny mpianatra rehetra dia afaka mangataka vatsim-pianarana. Azafady mba tadidio fa raha misy mpianatra efa mahazo fihenam-bidy amin'ny saram-pianarana sy / na fandoavana saram-pianarana ho anisan'ny fifanarahana na politika hafa eny amin'ny oniversite, ity karazana famatsiam-bola ity dia sokajiana ho fanampiana andrim-panjakana ary ireo mpianatra ireo dia tsy ho afaka handray fihenam-bidy / famoahana saram-pianarana ary vatsim-pianarana andrim-panjakana.
Ny fepetra takiana manerantany ho an'ny fahazoana vatsim-pianarana dia misy, saingy tsy ferana: ny mpianatra dia tsy maintsy mpianatra ho mpianatra na mpianatra nahazo diplaoma tsara amin'ny fotoam-pivoriany amin'izao fotoana izao miaraka farafahakeliny farafahakeliny mari-pahaizana naoty (GPA) 2.0 ho an'ny mpianatra bakalorea sy 3.0 GPA ho an'ny mpianatra nahazo diplaoma. Ny mari-pankasitrahana vatsim-pianarana ho an'ny isam-batan'olona dia mety manana fampahalalana fanampiny sy mari-pahaizana mendrika izay azo jerena etsy ambany.